नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गरिने, इन्धन उत्पादनको प्रदर्शन कार्यक्रम यहि फेब्रुअरीमा - Technology Khabar
» नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गरिने, इन्धन उत्पादनको प्रदर्शन कार्यक्रम यहि फेब्रुअरीमा
नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गरिने, इन्धन उत्पादनको प्रदर्शन कार्यक्रम यहि फेब्रुअरीमा
Technology Khabar २० माघ २०७७, मंगलवार
नेपालमा हाइड्रोज इन्धन उत्पादन हुने भइरहेको छ । खेर गइरहेको बिजुली प्रयोगरी हाइड्रोजन इन्धन बनाउन लागिएको हो । नेपालका लागि हाइड्रोजन इन्धन नौला हो । तर यूरोप तथा अमेरिकामा यसको परीक्षण उत्पादन तथा प्रयोग सुरु भइसकेको छ ।
नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)को सहकार्यमा नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने कार्य सुरु भएको छ । यो विषयमा निगम र केयूबीच इन्धन र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गरी काम गर्ने भनेर हालै द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा केयूका तर्फबाट स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन डा. डम्बरबहादुर नेपाली र निगमका तर्फबाट निर्देशक दीपक बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार यो सम्झौतापछि निगमले नेपालमै हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गरी निर्यात गर्नेसम्मको योजना बनाएको छ । हालसम्म निगमले भारतबाट इन्धन खरिद गरी स्वदेशी बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ ।
‘विद्युतबाट इन्धन उत्पादन गर्ने प्रविधिको विकासमा निगम र केयूबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौता कोशेढुंगा साबित हुन्छ’, पौडेलले भने। उनका अनुसार माथिल्लो तामाकोसीलगायत जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादन भएर खेर जाने विद्युत् प्रयोग गरी हाइड्रोजन इन्धन तयार पार्ने योजनालाई मूर्तरूप दिन लागिएको छ ।
सम्झौताअनुसार केयूको डिपार्टमेन्ट अफ मेकानिकल इन्जिनियरिङतर्फको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबले निकट समयमै विद्युत् प्रयोग गरी हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने विषयमा डेमोस्ट्रेसन कार्यक्रम आयोजनासमेत गर्न लागेको छ ।
ल्याब टिम लिडर डा. विराज थापाका अनुसार यही फेब्रुअरी महिनामा इन्धन उत्पादन गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको छ । यो कार्यक्रमपछि विस्तारै उत्पादन योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए ।
थापाका अनुसार १ किलो हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न करिब ५० युनिट बिजुली आवश्यक पर्छ । ‘तर, हाम्रो मुलुकमा बिजुली महँगो भएकाले तत्कालका लागि उत्पादन लागत खर्च केही महँगो पर्न जान्छ’, थापाले भने, ‘सरकारले किफायती मूल्यमा खेर जाने बिजुली उपलब्ध गराउने वातावरण बनाइदिए स्वदेशमै खपत गरी विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने गरी सस्तो मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्छौं ।’
उनका अनुसार खेर जाने बिजुली किफायती मूल्यमा उपलब्ध भएको अवस्थामा १ किलो इन्धन ६ सय रुपैयाँमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । इन्धनको अहिलेको मूल्यअनुसार प्रतिकिलो हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न १ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म लागत खर्च लाग्छ ।
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर भनिने मेसिन प्रयोग गरेर पानीबाट प्रशोधन गरिन्छ, जसले विद्युतीय प्रवाहको प्रयोगले पानीलाई यसको घटक, हाइड्रोजन र अक्सिजनमा विभाजित गर्दछ । नवीकरणीय ऊर्जा वा कार्बन मुक्त बिजुली स्रोतको प्रयोग गरी उत्पादित ग्यासमा कार्बन फुटप्रिन्ट शून्य हुन्छ, उक्त ग्यासलाई हरित हाइड्रोजन भनिन्छ ।
प्रकाशित: २० माघ २०७७, मंगलवार
स्मार्टफोन ब्राण्ड पोकोले ल्यापटप सार्वजनिक गर्दै, भारतमा प्राप्त गर्यो प्रमाणपत्र
एप्पलले ‘प्रोजेक्ट टाइटन’ अन्तरगत स्वचालित इलेक्ट्रिक कार उत्पादन शुरू गर्दै
फेसबुक गेमिङको ग्रोथ २१० प्रतिशत, अमेजन टुइच अझैपनि पहिलो नम्बरमा